बेंजामिन हैरिसन जीवनी - अमेरिकी जीवनी को 23 वीं राष्ट्रपति
बिन्यामीन हरिजन - संयुक्त राज्य को बीस-तेस्रो राष्ट्रपति
बेंजामिन हैरिसन 20 अगस्त, 1833 मा उत्तरी बन्ड, ओहायो मा जन्मिएको थियो। उनी आफ्नो दाजुभाइले विलियम हेनरी हैरिसनलाई आफ्नो पितालाई 600 एकड़ खेतीमा उचाल्दै जुन नौवें राष्ट्रपति बन्छ। हैरिसन घरमा शिक्षकहरू थिए र त्यसपछि सानो सानो विद्यालयमा भाग लिनुभयो। उनले किसानको कलेज र त्यसपछि मियामी विश्वविद्यालयको ओक्सफोर्डमा ओहियो। उनले 1852 मा स्नातक गरे, कानून अध्ययन गरे, र त्यसपछि 1854 मा पट्टी भर्ना गरियो।
हैरिसनका पिता जॉन स्कट हैरिसन अमेरिकी प्रतिनिधि प्रतिनिधिको सदस्य थिए। उहाँ एक राष्ट्रपतिको छोरा र अर्कोको बुबा हुनुहुन्थ्यो। हैरिसन आमा एलिजाबेथ इरविन हैरिसन थियो। उनको छोरा लगभग लगभग 17 वर्षको मृत्यु हुँदा उनको दुई जना बहिनीहरू, तीन पूर्ण भाइहरू र दुई जना बहिनीहरू थिए।
हैरिसन दुई पटक विवाह भयो। उनले 20 अक्टोबर, 1853 अक्टोबरमा उनको पहिलो पत्नी क्यारोलिन लाभिनिया स्कटसँग विवाह गरे। साथसाथै तिनीहरूसँग एक पुर्खा र एक छोरीको साथमा जन्मेकी छोरी थिए। दुःखको कुरा, उनले 18929मा पारित गरे। उनले6अप्रिल, 1899 मा मेरी मार्को स्कट मेडमििकसँग विवाह गरे जब उनी 62 वर्षकी थिइन् र उनी 37 वर्षकी थिइन्। सँगै उनीसँग एलिजाबेथ नामक एक छोरी थियो।
प्रेसिडेंसी भन्दा अगाडि बिन्यामीन हररिसको क्यारियर
बेंजामिन हैरिसन कानून अभ्यासमा प्रवेश गरियो र रिपब्लिकन पार्टीमा सक्रिय भए। सिभिल युद्धमा लड्न 1862 मा सेनामा सामेल हुनुभयो। आफ्नो सेवाको क्रममा उहाँले अटलांटामा जनरल शर्मिमानसँग विवाह गर्नुभयो र ब्रिगेडियर जनरललाई पदोन्नति गर्नुभयो।
उनले युद्धको अन्त्यमा सैन्य सेवा छोडे र उनको कानुनी अभ्यास सुरु गरे। 1881 मा, हैरिस अमेरिकी सीनेट को लागि निर्वाचित भएको थियो र 1887 सम्म सम्म काम गरे।
1888 मा, बेंजामिन हरिजन राष्ट्रपति को लागि रिपब्लिकन नामांकन प्राप्त गरे। उनको चलिरहेको साथी लेवी मोर्टन थियो। उनको प्रतिद्वंद्वी निरन्तर राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवल्यान्ड थियो ।
यो एक नजिकको अभियान थियो जसमा क्लिभल्याण्डले लोकप्रिय मतदान गरे तर न्यूयर्कको आफ्नो घरको स्थिति लिन र असफल भएन।
बिन्यामीन हररिसको प्रेसीडेंसीको घटनाक्रम र समापन
बेंजामिन हैरिसन ग्रोभर क्लिभल्याण्डको दुई राष्ट्रपति पदका बीचमा सेवा गर्ने भेदभाव थियो। 1890 मा, उहाँले कानूनमा निर्भर र असक्षमता पेंशन अधिनियममा हस्ताक्षर गर्नुभयो जसले विवेकहरू र उनीहरूका आश्रितहरूका लागि पैसा प्रदान गर्दथे यदि उनीहरूले गैरआवासीय कारणहरूबाट असक्षम पारिएको थियो।
1890 को अन्त मा एक महत्वपूर्ण बिल शर्मन एंटी-ट्रस्ट अधिनियम थियो । एकाधिकार र ट्रस्टहरूको दुर्व्यवहार कोसिस गर्न र रोक्नको लागि यो पहिलो अविश्वसनीय कानून थियो। जबकि कानून आफैं अस्पष्ट थियो, यो सुनिश्चित गर्न को लागी एक कदम को रूप मा महत्वपूर्ण थियो कि व्यापार एकाधिकार को अस्तित्व द्वारा सीमित छैन।
शर्मन चांदी खरीद ऐन 1890 मा पारित भयो। यसले संघीय सरकारलाई चांदीको प्रमाणपत्रको लागि चांदी खरिद गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि तिनीहरू चाँदी वा सुनको लागि फर्काउन सक्थे। यो ग्रोवर क्लिभल्याण्डद्वारा खारेज गरिनेछ किनभने यो राष्ट्रको सुनको भण्डार ध्वस्त हुन सक्छ किनभने मानिसहरू सुनको लागि आफ्नो चाँदी प्रमाणपत्रमा परिणत भयो।
1890 मा, बेंजामिन हैरिसन ले एक टैरिफ को प्रायोजित गरे जो कि आवश्यकताहरु लाई 48% कर को भुगतान गर्न चाहते हो।
यो परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्यहरूको वृद्धि भयो। यो एक लोकप्रिय टैरिफ थिएन।
पछाडि राष्ट्रपति पद
बेंजामिन हैरिसन राष्ट्रपति पद को रूप मा इंडियानापोलिस मा सेवानिवृत्त भयो। उहाँले कानून र 1896 मा अभ्यास गर्न फर्कनुभयो, उनले मैरी स्कट भगवान दिमिमलाई सम्झाउनुभयो। उनी पहिलो महिला थिए जब उनी आफ्नी पत्नीलाई सहायक थिए। बिन्यामीन हरिजनको मार्च 13, 1901 निमोनियाको मृत्यु भयो।
बिन्यामीन हरिजनको ऐतिहासिक महत्व
बिनामिनर हैरिसन राष्ट्रपति थिए जब सुधार सुरु भयो लोकप्रिय। आफ्नो समय कार्यालयमा, शर्मन एंटी-ट्रस्ट अधिनियम पारित भयो। यद्यपि यो आफैं को लागी त्यो प्रबलनीय थिएन, यो एकाधिकार मा शासन गर्न को लागि एक महत्वपूर्ण पहिलो कदम थियो जो जनता को लाभ ले रहे थिए।
राष्ट्रपति र उपाध्यक्षको चार्ट
सांसद अनुमोदन आवश्यक राष्ट्रपति नियुक्त नौकरिहरु
जेम्स मैडिसनको बारेमा 10 जान्न कुराहरू
टाइमलाइन: प्रारम्भिक जीवन अब्राहम लिंकन
राष्ट्रपति कैबिनेट र यसको उद्देश्य
कुन राष्ट्रपतिहरू बाँचेका थिए?
10 मिलन Mill Mill Fillmore को बारे मा जान्न
इतिहास र वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपतिको सफलता
अमेरिकी सरकारमा घरेलू नीति के हो?
ग्रोभर क्लीवल्यान्डको बारेमा जान्न शीर्ष 10 कुराहरू
5 ओबामाका बारेमा विकी मिथकहरू
पिरासीको स्वर्ण युग
आगो-ब्रेकिंग: कसरी सुरक्षित साटो सास फेर्न
इच बिन ईन बर्लिनर-जेली डोनट मिथ
फ्यूच - उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास
मेरो घरमा यी साना ब्ल्याक कुञ्जीहरू के हुन्?
रेस्टुरेन्टमा "तपाईं आदेश गर्न चाहानुहुन्छ" प्रयोग गर्दै
सीरियल किलर टेड बन्निको प्रोफाइल
डिएगो वेलाजक्वेज डे क्वेलरको जीवनी
निराशामा बाइबल पदहरू
टेलरमैड एम 1 गोल्फ क्लब
जागरण रिबन - रंग र के उनि प्रतिनिधि
7 तरिका शिक्षकहरूले गलत प्रश्न उठाउँछन्
लघु विश्वविद्यालय प्रवेश
शब्दहरू लिङ्क गर्दै
10 कम ज्ञात डरावनी ख्यातिहरू हेलोवीनको रूपमा ड्रेस अप गर्नुहोस्
गीतहरू जर्ज डब्ल्यू बुश र इराकमा युद्धको विरोध
संयुक्त राज्यका क्षेत्रहरू
ओलम्पिक पदकहरू के बनाइएका छन्?
कसरी 'डा। फिल शो' को लागि नि: शुल्क टिकट प्राप्त गर्न को लागि
कार्ल सागानले आफ्नो धर्मलाई खुलासा गर्ने उद्धरण गरे
अंग्रेजीमा ध्वनि प्रतीकत्ववाद (परिभाषा र उदाहरणहरू)
स्वचालित रूपमा वेब साइटहरू वेब साइटहरू हेर्दै